भारतपछि प्रचण्ड चीन प्रस्थान यस्तो छ भित्रि खास कारण !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन प्रस्थान गरेका छन्।चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष निमन्त्रणामा दाहाल चीन गएका हुन् । चीन जानुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले आफू चीन जान लाग्नुको बाहिरी कारण बताए ।
विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले दुई देशबीच भएका समझदारी कायम गर्ने वातावरण बनाउनु नै आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य रहेको बताए। नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध विस्तार नै आफ्नो भ्रमणको प्रमुख ‘एजेण्डा’ हो,उनले भने । यस्तै विगतमा दुई देशका सरकारका बीचमा भएको सहमति तथा सहकार्यका विविध विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत आफूहले पहल गर्ने उहाँले जानकारी दिए ।
पार्टी एकतापछि पहिलोपटक चीन जान लागेका अध्यक्ष प्रचण्डको भ्रमण टोलीमा पत्नी सीता, छोरी गंगा, प्रमुख स्वकीयसचिव जोखबहादुर महरा र एक चिकित्सिक रहेका छन्। यसअघि नै नेकपाका प्रवक्त नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली चीन गइसकेको छ।
अध्यक्ष प्रचण्ड असोज ३ गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।
Previous Previous post: गगन थापाले संसदमा सभामुख महरालार्इ प्रश्न गर्दै गृहमन्त्रीलाई के भने ?
Next Next post: ‘निर्मलाको न्यायका निम्ति बानेश्वरमा प्रर्दशनपछि प्रम ओलीले प्रहरी हेडक्वाटरलार्इ दिए यस्तो निर्देशन